साउथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल आमा बनिन्, पति गौतमसँग बच्चाको फोटो सार्बजनिक गरिन ! - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / साउथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल आमा बनिन्, पति गौतमसँग बच्चाको फोटो सार्बजनिक गरिन !
जे होस्, काजल यस फिल्मको हिस्सा नहुने बारे मा आधिकारिक जानकारी अहिले सम्म खुलाइएको छैन। उनी काजोलले सकेसम्म चाँडो काम गर्ने प्रोजेक्टहरु लाई समाप्त गर्न कोसिस गरीरहेकी छिन्। यद्यपि अभिनेत्रीले आफ्नो गर्भावस्थाको पुष्टि गरेकी छैनन्। समाचारका अनुसार एक युवा सदस्य काजलको घरमा आएका छन्। काजल र उनका पति गौतमले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना साथीहरुलाई यो जानकारी दिएका छन्। आउनुहोस् हामी तपाईंलाई यसको बारेमा विवरण बताउँछौं। यो सम्पूर्ण मा एक मोड़ छ। ट्विस्ट यो छ कि काजल अग्रवाल र गौतम किचलु एक नयाँ पाहुना छन् तर उनी बच्चा होइनन् तर एक पाल्तु कुकुर हुन्। दुबै जनाले यस पाल्तु कुकुर को तस्वीर सोशल मिडिया मा पोस्ट गरेर यस बारे मा जानकारी दिएका छन्। मानिसहरु पहिले देख्दा छक्क परेका छन्।
उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि ‘जीवनले हामीलाई समावेशी र माया गर्न सिकाउँछ’। उनी भन्छन्, “मियाँ उनीहरु संग धेरै रमाईलो र उत्साह संग हाम्रो जीवन मा आउनुभएको छ, म यो यात्रा कसरी बाहिर जान को लागी पर्खन सक्दिन। आफ्नो अकाउन्टमा यो पोस्ट सेयर गर्दा काजलले क्याप्सनमा लेखिन् कि ‘मँ मेरो परिवारको नयाँ सदस्य, लिटिल मियाँ’ को परिचय गराउँछु। यस संगै, उनी लेख्छिन्, “जसले मलाई लामो समयदेखि चिन्छन्, उनीहरुलाई थाहा छ कि म बचपन देखि कुकुर बाट छु।”